Saturday yiri nkata — HunterThinks.com Saturday yiri nkata — HunterThinks.com
Ihe: 01 September 2018
emelitere: 03 September 2018
Saturday yiri nkata
ọ bụla Saturday, M yiri nkata m ọgwụ. M na-eme nke a ugboro kwa izu n'ihi na m ka na-eme omume nke atụmatụ n'ihu: dị ukwuu ka m nwere ike mgbe-enweghị ebe obibi, nọ n'ụkọ, na a arịrịọ.
M ẹmende Saturday n'ihi, na kaadị, a Mexico ahịa ọgwụ yinye akanyam ihe niile n'ihi na 25% anya. Ọ bụrụ na m na-ezuru ego, M na-azụta a na nkà mmụta ọgwụ mgbe m nwere ihe na-erughị 14 ụbọchị fọdụrụ. Nke na-enye m abụọ zubere ụbọchị Mọnde ịzụta ọgwụ, nke pụtara na ọ bụrụ na apụghị m ga-esi na-ere ọgwụ na mbụ Monday, Anọghị m a nsogbu ọnọdụ. ọzọ, M ka mma na atụmatụ n'ihu: m ọdụdọ na-fọrọ nke nta mgbe n'ihi ịda ogbenye.
Alprazolam: ~ Ụbọchị 12 (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
Antacid / ochie: 7 doses
Anti-afọ ọsịsa: 7 doses
Bupropion: 4 ụbọchị (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
Diazepam: ọ dịghị onye (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
Honey: ọ metụtaghị
Ibuprofen: 6 doses
L-Tyrosine: ọ dịghị onye, fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume ịzụta ke Mexico (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
Loratadine: ~ 14 ụbọchị
Modafinil: 6 ụbọchị (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
Naproxen / lidocaine jel: ezuru
Omeprazole: ~ 21 ụbọchị
Sunblock: ọ dịghị onye
Venlafaxine: 7 ụbọchị (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
vitamin B: ~ 22 ụbọchị (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
Live 100% ike ọṅụṅụ: ịzụta kwa ụbọchị (mkpa na nkà mmụta ọgwụ)
M chọrọ dee ihe. M karịsịa chọrọ akọwa ọgwụgwọ plan m chọrọ na-achụso. ma, M ga-ahapụ a obere ogige n'ihi na e nwere ọtụtụ stressors. M ede ebe a n'abalị ikpeazụ n'ihi na m dara ogbenye nke na-ehi ụra n'ime. 1) M na-ehi ụra nke ọma n'ihi na nightclubs egwuri music ruo mgbe 7 am and because every time someone walked by me, M nchegbu banyere na-apụnara ma ọ bụ mmekọahụ tiri. 2) M nwere nnọọ na-egbu mgbu eze mgbu na m na-agbalị ịgwọ antiseptik mouthwash. 3) M bụ nnọọ nauseous niile ụtụtụ, nke dị oké ọhụrụ. 4) M erighi ezu taa. 5) M erighi ezuru 10 ụbọchị, na akụkụ n'ihi nke eze mgbu. 6) Abalị ụnyahụ, onye defecated n'ime ogige. Ọ bụ a obere ogige, na bowel ije bụ nnukwu na-asọ oyi ma nwere a dị ike, -apụghị ịgbanahụ agbanahụ-esi ísì. 7) Ọ bụ etiti ehihie na-agaghị ekwe omume na-agbanahụ anyanwụ: I am hot and getting sunburnt.
m bụ n'ịnagide niile nke ndị stressors, ma ikpeazụ a stressor bụ ilu ahịhịa na mebiri na camel na azụ. 8) Onye dọwara ụgbọala ha na-esote park, na ụgbọala oti mkpu na-etiri na-abụghị nkwụsị. Ọ bụ insanely oké. M nwere ekweisi ná ntị m, na m na-ege ntị music na olu na 100%, ma ọ gwụla ma m inupụ ekweisi n'ime ntị m, M ka pụrụ n'ụzọ doro anya na-anụ mkpu. The onye dịkwa n'ebe ụmụ ụgbọala na-adịghị eme ihe ọ bụla banyere ya.
M na-adịghị na-anọdụ gburugburu na-eti mkpu, “The oké mkpọtụ bụ ndị ọjọọ. Onye na-azọpụta m.” Taa bụ ihe nlereanya magburu onwe nke ndụ m. M na-aga nke ọma na-anagide egwu n'abalị nke na-atụ egwu na-ehi ụra, mgbu site na nje eze, ọhụrụ na oké ọgbụgbọ, agụụ, ogbenye oriri na-edozi, a ísì yiri a nsị ọgwụgwọ osisi, okpomọkụ, na-agbakwụnye na ndị ọzọ ntachu m ẹdude ntachu. The ụgbọ ala mkpu bụ oké ezu na ọtụtụ ndị na-akwụsị na-ele anya na ụgbọ ala: ọ bụ oké oké.
Ọ bụrụ na m na-adịghị ama edi ndị kpọmkwem stressors, ogbenye ọnụ ntụ, enweghị olileanya, afọ ise nke dịpụrụ adịpụ owu na-ama, 5HT2A desensitization, hypo-dopamine, na ihe overactive amygdala, mgbe ụgbọala oti mkpu agaghị egbochi m eme.
Ileghara ma ọ bụ akwado m na-agbake?
5HT2A, Alprazolam, nchegbu, Being alone and loneliness, Bupropion, Caffeine, Coping, ịda mbà n'obi, Diazepam, Nsogbu, Enweghị Ebe Obibi, enweghị olileanya, Modafinil, Omeprazole, Poverty, Psilocybin, Robbed, Sexually assaulted, Venlafaxine, Vitamin B complex, Ihe ọ bụla banyere ha